u-Bavuma uhlelela ama-Proteas usuku olukhulu
u-Temba Bavuma uhole indlela njengoba ama-Standard Bank Proteas edlale umdlalo ocishe wamuhle kakhulu osukwini lesibili lomdlalo wokugcina we-Sunfoil Test bedlala ne-Australia e-Bidvest Wandererd Stadium ngoMgqibelo.
Usuku lingahumushwa ngezibalo njengoba ama-Proteas ethole ama-runs angu-175 belahlekelwa ama-wicket abo okugcina amane futhi i-Australia ifike ku-110/6 ekupheleni kosuku.
Okuphoxile kuma-Proteas ukuthi u-Bavuma uphelelwe azoshaya nabo emuva kokufika ku-95 (194 balls, 13 fours) njengoba bekumele athole ikhulu lakhe lesibili kanye nelokuqala ne-Australia.
Kukho konke, ube ingxenye yama-partnership amathathu abalulekile, eyokuqala yayingoLwesihlanu njengoba yena no-AB de Villiers bahlanganisa ama-runs angu-52 nge-wicket yesihlanu. Waphinde wahlanganisa ama-runs angu-85 nge-wicket yesikhombisa eshaya no-Quinton de Kock kanye nama-runs angu-76 nge-wicket yesishagalolunye no-Keshav Maharaj othole i-career best engu-45 emabholeni angu-51 (4 fours, 2 sixes). Kodwa ama-wicket okugcina amabili aphume emabholeni amabili, wasala yedwa u-Bavuma.
Ngaphandle kwalokho, ama-Proteas aqede usuku engaphambili ngama-runs angu-378 okuzokwenza i-follow on ithandeke.
Kwaphinda futhi, ama-Proteas agqubekile nokuvusa ukushaya kwalaba abashaya emsileni njengoba ama-partnership amane okugcina ehlanganise ama-runs angu-189.
Ngesikhathi bekumele kushaye i-Australia basheshe bangena enkingeni njengoba bobathathu abadlali abafakwe eqenjini baxhase ngama-runs angu-12 kuphela phakathi kwabo njengoba beqale kabi kuphume abathathu kuma-runs angu-38 emuva kwebhola elilodwa kwi-over yesi-13 futhi u-Vernon Philander ebekwi-hat trick.
u-Usman Khawaja uthe ukuba nenkani kwi-partnership yakhe no-Shaun Marsh, bahlanganisa ama-runs angu-52 nge-wicket yesine ngaphambi kokuthi u-Khawaja (53 off 84 balls, 9 fours) aphume ngokunqakwa kwi-leg-side u-De Kock, esondele kuma-stumps ngesikhathi kuphosa u-Philander.
Obhuti bakwa-Marsh baphume belandelana bashiya ukapteni omusha u-Tim Paine ukuthi abaphosayo bahlangane naye ngosuku lwesithathu ekuseni.
Okuhle okukodwa kube ukuphosa kwa-Pat Cummins osaqhubeka nokuphosa kahle kwi-series. Ama-wicket okugcina amabili amunike i-five-wicket haul ayisebenzelile (5/83 kuma-overs angu-28.5), oyesibili kumsebenzi wakhe, womabili wawathola e-Wanderers.
i-Sunfoil Education Trust (SET) ithole imali engango-R113 000 okuphume ko-four no-six abashayiwe kanye nama-wicket atholiwe iwona womabili amaqembu kumdlalo, okubeka imali ye-series ku-R846 000.
u-Markram ubekela ama-Proteas isikhonkwana ngaphambi kokuthi i-Australia iziphindiselele Ama-Proteas afuna ukumvalelisa kahle u-Morkel Ubuhlakane bukaMorne kuhola ukunqoba okukhulu kwama-Proteas nokuba u-Morkel ufinyelela ku-300; uhlelela ama-Proteas ukuba ngaphambili i-CSA ihalalisela u-Morne Morkel ngokungena kwiqembu lo-300 u-Cummins uguqula izinto emuva kwekhulu lika-Elgar elinike Ukubuya kwa-Rabada ‘ukuphakamisa’ okukhulu kuma-Proteas – u-Gibson i-CSA yamukela uphumela wesicelo i-CSA iyaqhela kumamaski zika-SBW; iyaxolisa kwi-CA u-Rabada uwaqalisa kahle ama-Proteas nge-‘fifer’ yakhe yesishagalombili u-Du Plessis ufuna kukhulume ikhilikithi